Maxaa sababay in uu baxsado Askarigii dhaawacay Taliyaha ilaalada Madaxweynaha.. - Latest News Updates
Maxaa sababay in uu baxsado Askarigii dhaawacay Taliyaha ilaalada Madaxweynaha..
Maxaa sababay in uu baxsado Askarigii dhaawacay Taliyaha ilaalada Madaxweynaha Askari katirsanaa ciidamada ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya oo shaqada laga ruqseeyay ayaa shalay galab dhaawacay Taliyaha ciidamada gaarka ah ee Madaxweynaha Soomaaliya waxa uuna ku dhaawacay albaabka Madaxtooyada Soomaaliya.
Falkaan ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa 4 kontarool oo laga ilaaliyo Madaxtooyada Soomaaliya waxa uuna aad ugu dhowaa mid kamid ah, sidoo kale waxa uu ka dhacay ka soo horjeedka Hotel SYL oo ay hor fadhiyaan Ciidamo kale oo hoteelka ilaaliya.
Dhaawaca Sarkaalkaan lagu magacaabo Cabdifitaax daba-gaalle ayaa ka dhacay Albaabka xarunta Akadeemiyadda Cilmiga Fanka iyo Suugaanta oo ay ciidamo ilaaliya Madaxtooyada Soomaaliya u jiraan wax ka yar 30 talaabo halkaas oo lagu baaro gaadiidka ka soo gudbta barta kontarool ee Xaawa-Taako.
Askariga dhaawaca geestay ayaa la sheegay in uu ka baxsaday goobta waxa uuna ka booday carra turro yaala darbiga taalada SYL ee ku dhaggan hotel SYL.
Warar ay heshay Idaacadda Kulmiye ayaa sheegaya in Askariga dhaawaca geestay ay hore u murmeen taliyihiisa waxayna doodooda ka dhalatay arimo ku saabsan gunno kaas oo sababay in shaqada laga ruqseeyo sida ay sheegayn Saraakiil katirsan Villa Somalia.
Dad badan ayaa su’aal ka keenay sida uu ka baxsaday Askarigaasi, qaar kale ayaa muujiyay rajo yari dhinaca amniga ah mar hadii uu baxsaday Askari halkaasi Sarkaal sare ku dhaawacay.
Mas’uuliyiin kamid ah qubarrada amniga ayaa sheegay in arintaan ay aheyd dayacaad amni iyo mas’uuliyad darro waxayna sheegayn in ay tusaale ka bixineyso dadaalka hey’adaha amniga ee DF-ka Soomaaliya.
Previous articleDumar dayaxa aaddi lahaa oo dhar la’eg loo waayay